Ugqiba njani ubungakanani bokutya bokupakisha bokutya?
Ukuba sele ndikwicandelo lokupakisha iminyaka emininzi kangaka, Owona mbuzo ubuzwa rhoqo yindlela yokwenza isigqibo ngobungakanani bengxowa yam yokupakisha?
Ukupakisha yinto ebalulekileyo kuyo yonke imveliso, kwaye nokuba sisigqibo esibalulekileyo esinokumisela ukuba imveliso yakho ingathengiswa kakuhle. Ke uyilo lokupakisha lubaluleke kakhulu. Ngokwesiqhelo, ungacela umyili wobuchwephesha ukuba ayilele umsebenzi wobugcisa, ubandakanye ulwazi ofuna ukuxelela abathengi, ilogo yakho kunye nombala ofuna ukuwusebenzisa, le misebenzi inokwenziwa ngabantu abaqeqeshiweyo, awunakhathazeka malunga nayo .
Kodwa icandelo elinzima lokuhlaziya yindlela yokujonga ubungakanani bengxowa yam? Umntu othile angaya emarikeni ayokufumana ngqo iibhegi zokupakisha zeemveliso ezifanayo kwaye abhekise kubungakanani bazo.
Kodwa wena ofuna ngokungqongqo yonke imiba yemveliso, ufuna ngenene ukwenza ubungakanani obuyifanele imveliso yakho. Ngeli xesha, ukongeza ekubhekiseni kwiimveliso kwintengiso kunye nokumamela iingcebiso zomthengisi weebhegi zokupakisha, unokusebenzisa iphepha okanye ifilimu yeplastiki ukwenza ibhegi elula yofakelo lwesilingo ukumisela ubungakanani obuchanekileyo. Apha masikufundise indlela yokusebenzisa iphepha ukwenza ibhegi yokupakisha elula ukuzama imveliso.
Uhlobo lwengxowa yokupakisha
Okokuqala, kufuneka siqonde ukuba zeziphi iintlobo zeengxowa zokupakisha. Ngokubanzi, iibhegi zokupakisha zokutya zahlulwe zaba ziipakethi ezicaba, yima ngeengxowa, iiglasi zecala-gusset, iipakethi ezithe tyaba ezisezantsi, kunye nezingxobo ezitywinwe ngasemva. . Iipakethi zespout ezigcwalisa isiselo, zinokuhlelwa njengeepakethi zokuma. Iibhegi zokufunxa, iingxowa zokubuyisa kunye nezikhenkcezisi ngokubanzi ezihlelwa njengeengxowa ezithe tyaba okanye iipakethi zecala-gusset. Masazise enye nganye:
1.Iipakethi eziflethiweyo: ikwabizwa ngokuba yibhegi yomqamelo, amacala amathathu atywiniwe, ungabeka kwimveliso ukusukela ekuvuleni, iingxowa ze-Vacuum, ukubuyisela iingxowa kunye neefriji zefriji zihlala zisebenzisa olu hlobo lwengxowa kuba akukho angle engaboniyo, kwaye ungawukhupha umoya ngaphakathi ngokulula Kwaye iyahambelana nemveliso yevalue encinci, njenge powder, snack, iilekese, njl njl inokuxhonywa kwishelufa okanye ilele eshelufini ukubonisa, kwaye kulula ukuyipakisha ebhokisini kuba icabalele.
2 ..Yima yakutyaes: enokuma kwishelufa ngokwayo, kukho i-gusset engezantsi, enokuthi ichithwe emva kokugcwalisa imveliso, kwaye kube lula ukuphakama eshelufini kunye nokubonisa. ithandwa kakhulu, kwaye ilungele iichips, iilekese, itshokholethi, amandongomane, iziqhamo ezomisiweyo, umgubo, iti, isilwanyana esityiwa, ukunambitheka, imifuno, i-cannabis njl Olu hlobo lwengxowa yokupakisha kukugcwalisa imveliso encinci enobunzima obuphakathi. umsebenzi wobugcisa obugqwesileyo kunye nezinto ezizinzileyo, olu hlobo lwebhegi yokupakisha ibhalwe kakhulu xa iboniswa eshalofini.
3.Side gusset yakutyaes:luhlobo lwengxowa yokuba la macala mabini asongelwe kuyo, kwaye la macala mabini aya kwandiswa emva kokugcwalisa iimveliso, kwaye athandwa kwikofu, irayisi njalo njalo, efanelekileyo kakhulu kwisitena selayisi, kwaye inokubakho imveliso yakho imilo isikwere, iya kuba intle kakhulu.
4.Flat ezantsi pouches:Olu hlobo lwengxowa luthandwa kakhulu emarikeni, kuba umphantsi wayo ucabalele, unokuma phezu kweshelufu, kwaye olu hlobo lwebhegi lunokufikelela kumacala ali-11 anokusetyenziselwa ukuprinta, indawo eyaneleyo yokubonisa ulwazi kufuneka uprinte engxoweni. Olu hlobo lwebhegi lusetyenziselwa ukubamba iimveliso ezinamandla amakhulu, njengokutya kwekati enkulu, ukutya kwenja, ikofu, njl. Nangona kunjalo, ngenxa yenkqubo entsonkothileyo, iindleko zale ngxowa ziphezulu kakhulu, kodwa zintle kakhulu ukubonisa kwiishelufa.
5.Back ibhegi etywiniweyo: Ingxowa etywiniweyo yangasemva itywiniwe engxoweni, imilo inokufana neepakethi ezithe tyaba okanye iipakethi zegusset zecala.Ukuba unomatshini wakho wokupakisha, ungathenga umqulu wefilimu ukuvelisa ibhegi yangasemva etywinwe ngqo kwimveliso.
Uyisonga njani ingxowa yokupakisha usebenzisa iphepha okanye ifilimu yeplastiki?
Okulandelayo Masazise indlela yokusonga ibhegi yokupakisha usebenzisa iphepha okanye ifilimu yeplastiki esekwe kubungakanani obubhekisa kwisingxobo sokupakisha esifanayo okanye isincomo somthengisi wengxowa yokupakisha.
1: Thatha iphepha elilingana nobubanzi bengxowa yakho, kwaye ubude buphindwe kabini njengobude bengxowa yakho, ulisonge phakathi, emva koko usebenzise iglu okanye istapler ukulungisa la macala mabini, emva koko kuya kuba yingxowa elula ethe tyaba.
2.Stand up yakutya:Thatha iphepha elilingana nobubanzi bebhegi yakho, kwaye ubude buphindwe kabini njengobude bengxowa yakho kunye nobubanzi be-gusset esezantsi, emva koko tyhila iphepha, ulisonge umphezulu ngokobude bengxowa leyo, kwaye uya kufumana isikroba, emva koko tyhila iphepha, ulisonge ezantsi ephepheni ngokobude bengxowa, ukuze ube nezikrelemnqa ezimbini. Jika iphepha uligqibelele phakathi kwezi zinto zimbini, cinezela kube kanye, emva koko ulungise la macala mabini ngeglue okanye istaples, emva koko ufumane ibhegi elula yokuzixhasa.
Yakutya gusset yakutya:Thatha iphepha elinobubanzi obuphindwe kabini kububanzi bengxowa yakho, kwaye ubude bulingana nobude bengxowa yakho, kwaye ulisonge ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, ulilungise ngeglu okanye ukutya okusisiseko, emva koko zoba umgca osongwayo we-1/2 gusset ububanzi kulowo nalowo kwicala lengxowa, tyhila iphepha, kwaye wenze umsebenzi ofanayo kwicala lasekhohlo nasekunene kwengxowa. Emva kokuzoba, songa icala lasekhohlo ngaphakathi ukuze imigca esongwayo ngaphambili nangasemva kwala macala mabini ihambelane, cinezela, uze uphinde isenzo esinye kwicala lasekunene, emva koko ulungise ezantsi ngeglu okanye ukutya okuphakathi. Ngale ndlela, ibhegi elula etywiniweyo enamacala amane ilungile.
Yakutya 4.Flat ezantsi:Ukulandela inyathelo elingentla lokwenza isikhwama sokuma ngaphandle kokulungiswa, thabatha amaphepha amabini alinganayo ububanzi be-gusset, kwaye ubude bulingana nobude bengxowa yakho, sibabiza iphepha elisecaleni, uze ume iphepha elinye ecaleni lasekhohlo Icala lokuma ngengxowa, kwaye ulungise ezantsi kunye namacala, emva koko wenze into efanayo kwicala lasekunene, emva koko kukho isingxobo esisezantsi esisezantsi.
5.Back yakutya etywiniweyoThatha iphepha elinobubanzi obuphindwe kabini kububanzi bengxowa yakho + 2cm, kwaye ubude bulingana nobude bengxowa yakho, emva koko ukusuka kwicala lasekhohlo phinda ngaphakathi ububanzi be-1/2, ngokufanayo ukuya kwicala lasekunene, uze usonge indawo yokutywina eyi-1cm kwezi zimbini Inxalenye esongiweyo, emva koko ulungise indawo yokutywina ilungile.
Ukuba awonelisekanga bubungakanani bengxowa obucetyiswe ngumthengisi wakho weebhegi zokupakisha, emva kofakelo lwetyala, ungakhetha uhlobo lwebhegi oyithandayo kwaye ujike ubungakanani kwaye ujike kwakhona. Khumbula ukuba kufuneka uzame imveliso ngaphambi kokuthatha isigqibo kubungakanani bengxowa, kwaye uqiniseke ukuba ubungakanani bengxowa abunangxaki yokugcina imveliso yakho. Ubunzima kunye nezinto zebhegi zinokulandela ngokupheleleyo iingcebiso zomenzi wokupakisha, emva koko ucele isampulu yesikhwama sezinto ezihambelanayo kunye nobukhulu bokuqinisekisa umgangatho wengxowa. Ukupakisha kuka-Beyin kunama-20 eminyaka yokupakisha ibhegi yamava. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, unokufumana iimpendulo zobungcali apha ukukunceda wenze ibhegi efanelekileyo.